Pejy fandefasana cactus maimaim-poana maimaim-poana - Pejy fandokoana cactus
Pejy fandokoana cacti
Ireo pejinay fandokoana dia mampahafantatra am-pahakingana ny ankizy amin'ireo zavamaniry manan-danja ao amin'ny faritra sy manerantany. Ireo pejy fandokoana dia matetika natao ho tsotra sy ho an'ny ankizy ary hanohanana ny fifaliana amin'ny fandokoana.
Ny fandokoana voninkazo amin'ny loko mamirapiratra dia kilasika tsy ho an'ny ankizy kely kokoa ihany. Ary na ny cactus aza dia betsaka no azo atolotra fa tsy hoe "ouch" fotsiny. Ny fikitihana ny rohy dia manokatra ilay pejy miaraka amina modely fandokoana voafantina:
Cactus any an'efitra
Landscape miaraka amin'ny cacti
Vorona amin'ny kaktus
Loko amin'ny kaktus
Cacti ho an'ny fandokoana
Cacti ao anaty vilany
Cacti pejy fandokoana | zavamaniry
Cacti pejy fandokoana